Rise Archives — Trip LEE - OFISIALY SITE
Mitsangàna Mitsangàna Mitsangàna Mitsangàna Mitsangàna Mitsangàna Mitsangàna Mitsangàna Mitsangàna Mitsangàna Mitsangàna Mitsangàna Mitsangàna Mitsangàna
Misy be dia be intsony ny hahita, hahafantatra, mitia, mankafy. Misy zava-misy izay dia lehibe izy ireo tsy azo nihena ho voly. The words “fun” “blast” “ball” “party” sound silly in the…
I nilalao baskety varsity amin'ny sekoly ambaratonga faharoa. Izany no fanambarana marina tanteraka (raha tsy manery ahy ny mamaritra ny teny hoe milalao). I nanatrika kely sekoly tsy miankina, ary raha toa ka misy ambony ianao nahazo ny toerana eo amin'ny varsity ekipa. Tiako ny lalao basket, fa be aho mijery azy io tsara kokoa amin'ny noho ny milalao azy io. Afaka miantso an'i Egypta mpilalao sy mivazavaza "mitsangàna!"Ao amin'ny mpitsara rehetra-kintana fahaiza-manao. Fa izany hatrany araka mandeha. Ny sekoly nanana hafahafa io fitsipika momba ny tena manao fanatanjahan-tena mba diplaoma, anefa, Dia efa voatery hifanaraka ka hanantonana ny lohany tamin'ny henatra izy isaky ny zoma alina.
Ny fitoeran-tavin feno dia foana ny lalao an-trano. Faly ray aman-dreny sy mpianatra-maro ireo namana avy mine- naneho niakatra mba hanohana ny ekipa. Mampalahelo fa, dia mety atao toy betsaka ny fahasamihafana eo amin'ny lalao toy ny nataoko. Tiako jerena any an-bleachers ombieny ombieny, manontany tena ny zavatra rehetra ny olona mieritreritra, indrindra fa ny raiko. Mihevitra aho fa nahatsapa fa samy isika dia fotsiny mba hijery, fa nitranga ny manana toerana tsara kokoa.
Aho dia dimy ambin'ny folo taona, ary ny fiainako dia satria nitodika ao anatin'ny avy. Ny anarako sy ny fahitana tsy niova, fa ny zavatra hafa rehetra ny momba tamiko dia nanana. Aho olona iray hafa tanteraka noho izaho efa herintaona na roa alohan'ny. Tsy hoe toy ny olona mandeha any amin'ny oniversite sy ny hamorona indray ny solon-tena amin'ny vaovao sy ny olo-; Aho hoe zavatra lehibe efa tamin'ny tao anatiko. Efa lasa Kristianina. Tsapako vaovao. Tsapako velona.
Nahatsapa izany tsara fa tsy maintsy hanambara izany ny olona izay te hihaino, indrindra fa ny namana sy ny fianakaviana akaiky indrindra. Ny olona rehetra dia namaly tamin'ny fomba hafa ny fiovana ato anatiko-ny sasany amim-pifaliana, ny hafa amin'ny fanoherana, fa resaka foana iray niavaka ho ahy.
Aho niresaka tamin'ny lehilahy zokiolona izay hajaina indrindra, Faly be ny manazava ny lalao drafitra ho an'ny hanome voninahitra an'Andriamanitra miaraka amin'ny fomba fiainako, manokana ny firaisana ara-nofo ny fahadiovana. Niezaka ny ho tony momba izany, saingy sarotra ny mihazona hatrany ny fientanentanana eo amin'ny. Dia tahaka ny teny amin'ny lelako niantoraka amin'ny iray voajanahary haingana, I nahazo ny heviny fa tsy ho faly tahaka aho. He was trying to…
Ireto daholo ny tononkira ho Trip ny fahadimy Studio Album Mitsangàna. Tsindrio ny hira lohateny mba hahita ny tononkira isaky ny lalana. Ankafizo ary hizara ny namana!
5. Tsy fantatrao
6. Rehetra mitsangana (fanelanelanana)
7. Rehetra mitsangana
8. Beautiful Fiainana 2 (mine)
9. reraka Ft. Andy Mineo
11. Lazarosy Ft. This'l
12. Rehetra My Love Ft. Natalie Lauren
13. Tapitra aho
14. Sweet Fandresena Ft. Dmitri McDowell sy Lea Smith
Track 1: Mitsangàna
Androany no andro-mitsangana izahay rehetra
Ny vatofantsika toy izany ny Lasa mijery ahy ho velona
Niara-dia hijoro hanohitra ny mirehitra lainga
Ary ankehitriny fa Izaho nahita ny elany aho vonona hanaraka
Mitsangàna, -mitsangana izahay rehetra
-Mitsangana izahay rehetra
Androany no andro
Aingao ambony indray aho mba hirehareha amin'ny lalamby ireo toy ny
Very saina aho amin'ny en, Mety aoriana tehamaina mics
Tsy mampaninona an-tsaina ny zava-misy na oviana na oviana aho nandao natrehin'ireo aho
Henoy ny tsara ianao dia tsy gotta manontany ahy indroa
Inty aho, Tonga eto aho mba hirehareha azy toy ny aho fantatra
Raha ry namana snore I'ma handeha ho azy
Ny Andriamanitra dia tsy misy Folklore, 'Mahatonga dia tena, izy tena
Ary ho any amin'ny lohahevitra akaiky
Fantatro ny mpamorona, Izy no ambony noho ny mpanamory manidina ao rahona dia natao tamin'ny tanana
Manoratra aho hilaza aminao ity fiainana ity dia tselatra amin'ny lapoely
How I'ma hisotro ronono rehefa mila cryer hilaza antsika mitsangana ka mijoroa?
Check Bika drafitra
My Dude, fa ny fasana dia tsy ny an-trano
Cause ianao lalana ambanin'ny tany efa ela loatra
Six lalina amin'ny daty eo amin'ny vato
Rehetra izy ireo hoe:, "Izany zazalahy lasa"
Eo moa, aza ianareo te-handeha an-trano?
Tsy ianao te-ho mihoatra noho ny Clone?
Fantatrao ve hoe fa ianao tia…
My boky vaovao, Mitsangàna, mivoaka 27 Janoary! Ho hita na aiza na aiza boky amidy. You can pre-order it now and visit the book website at Risebook.tv. Mivavaka aho ny Tompo dia hampiasa azy io mba hampaherezana ny taranaka mba hitsangana ka ho velona. Jereo ny tranofiara ambony ary vakio ny famaritana fohy ny boky eto ambany:
Ao amin'io boky mahery, Trip Lee milaza tonga ny fotoana mba hifoha sy RISE, mba hiaina ny fomba noforonina hiaina. Tanora na antitra, efa nantsoina isika mba hiaina ho Azy. Right…
Wait, Trip - no tsy misotro ronono?
A roa volana lasa izay dia nahagaga ny olona rehetra amin'ny alalan'ny nanambara ny raki-kira vaovao, “Mitsangàna.” Tsy mahatakatra ny fomba sarotra izany dia ny mangina momba izany eo anatrehan'i ny marika, ary nandeha aho-bahoaka. Ny rakikira Efa ao ny asa ho an'ny mahery ny herintaona, ary tsy afaka miandry ny hilaza ny rehetra - indrindra fa ireo izay nitandrina mangataka rehefa nandatsaka zava-baovao.
Ny valiny hatramin'izao no tena mampahery. Gaga aho fa olona mbola hanohana ahy na dia nisy aza aho somary nangina ny farany roa taona. Ny fitiavana sy fientanentanana dia nitombo ihany ny ahy.
Ny iray amin'ireo valinteny tsy gaga aho noho ity iray ity: "Andraso, Hoy Izaho: Hianao nisotro ronono?"Izany no fanontaniana izay manaraka ahy manodidina toy ny aloka. Aho niresaka izany amin'ny tafatafa, bitsika, ary bilaogy Lahatsoratra, fa fantatro fa mbola mazava ny sasany. Aoka aho hanohy hiezaka ny hametraka ny firaketana an-tsoratra mahitsy: Tsy mbola misotro ronono.
In 2012, Dia nanambara fa ho aho "hanitsaka miala amin'ny mozika." Eny, Fantatro fa toa fisotroan-dronono-Ish, fa minia tsy nampiasa izany teny. Foana aho izany fanahy iniana manjavozavo satria tsy 100% sure what it would…